Ụlọ Nche—E Nweghị Magazin Ọzọ Hụrụ Azụ Ya Anya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Chuvash Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hindi Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Mam Marathi Mongolian Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Ossetian Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ayacucho) Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek (Roman) Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ọ bụ Ụlọ Nche bụ magazin a kacha ekesa n’ụwa niile. A na-ebipụta Ụlọ Nche nke ọnwa ọ bụla ihe karịrị nde iri anọ na abụọ. Magazin na-esote ya bụ Teta! A na-ebipụtakwa ya nde iri anọ na otu n’ọnwa ọ bụla. Ọ bụ Ndịàmà Jehova na-ebipụta magazin abụọ a. A na-ekesakwa ha n’obodo dị narị abụọ na iri atọ na isii.
Oleekwanụ maka magazin ndị ọzọ ndị mmadụ na-ebipụta? Otu ụlọ ọrụ a na-akpọ The Association of Magazine Media kwuru na ọ bụ ụlọ ọrụ Amerịka a na-akpọ AARP na-ebipụta magazin a kacha ere n’Amerịka. Ndị e bu n’obi ebipụta ya bụ ndị gaferela afọ iri ise. A na-ekesa magazin a ihe karịrị nde iri abụọ na abụọ na narị puku anọ. A na-ekesa magazin ndị Jamanị a na-akpọ ADAC Motorwelt ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ nde iri na anọ. A na-ebipụtakwa magazin ndị Chaịna a na-akpọ Gushi Hui (nke kọrọ naanị akụkọ) nde ise na narị puku anọ.
A bịakwanụ n’akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ ndị Japan a na-akpọ Yomiuri Shimbun bụ ya ka a kacha ekesa. A na-ebipụta ya ihe karịrị nde iri.
Ọ bụkwa akwụkwọ Ndịàmà Jehova ka a kacha asụgharị. A na-asụgharị Ụlọ Nche n’ihe karịrị otu narị asụsụ na iri itoolu, na-asụgharịkwa Teta! n’ihe karịrị asụsụ iri asatọ. Ma, a na-ebipụta akwụkwọ a na-akpọ Reader’s Digest n’asụsụ iri abụọ na otu. Ihe a na-edekwa na nke e bipụtara n’otu obodo na-adị iche na nke e bipụtara n’obodo ọzọ.
Ụlọ Nche na Teta! adịghị ka magazin ndị ọzọ a kpọrọ aha ebe a n’ihi na ebe e si enweta ego e ji ebipụta ha bụ n’onyinye ndị mmadụ na-enye. Ihe ọzọ bụ na a naghị akpọsa ha na tiivi, n’Ịntanet, ma ọ bụ na redio. A naghịkwa ere ha ere.
Ihe mere e ji ebipụta Ụlọ Nche bụ ka e jiri ya kọwaa ihe dị na Baịbụl, nke ka nke, ihe Baịbụl kwuru gbasara Alaeze Chineke. A kwụsịtụbeghị ibipụta ya kemgbe afọ 1879 e bidoro ibipụta ya. Teta! na-ekwu gbasara ihe dị iche iche ndị mmadụ ma, dị ka ihe ndị e kere eke na ihe gbasara sayensị. Ihe mere o ji ekwu ha bụ ka ndị mmadụ nwee okwukwe n’ebe Onye kere ha nọ. Ọ na-ekwukwa otú ihe Baịbụl kwuru ga-esi baara anyị uru ná ndụ.
Akwụkwọ Ndị E Bipụtara n’Amerịka na 2011
Ole E Rere
Ebe E Si Nweta Ihe A E Dere Ebe A: The Association of Magazine Media